Ndị Dọkịta Amaghị Whonye Bụ Real Trans Kids Bụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ndị dọkịta amaghị onye ezigbo ụmụaka na-agagharị
Nnwale ahụ maka Ourmụaka anyị: Ndị dọkịta amaghị onye bụ ezigbo ụmụaka ụmụaka bụ
June 12, 2017By Walt HeyerNdị dọkịta adịghị ugbu a ụzọ buru amụma nke ụmụaka dysphoric okike ga-adịgide na dysphoria okike ha, na agbanyeghị ha, ha na-agbadata afọ ntakịrị maka ọgwụgwọ hormone na ịwa ahụ na-enweghị ike.
Dabere na amamihe dị n'oge ahụ, ọ dị mkpa ilekọta ụmụaka na-enwe dysphoria okike dị ka o kwere omume. Ka ọ dị ugbu a, ịwa ahụ na usoro ọgwụgwọ ga-eche ruo afọ iri na isii. Ma tupu mgbe ahụ, a pụrụ inye ndị na-eto eto iwu ka ha na ha mewe enyi mgbe ha na-eto eto, a na-agbakwa ụmụaka ume ka ha na-agaghari “n'etiti ọha mmadụ,” site n'ide aha, uwe, na ụzọ ha si ele ihe anya.
Ihe ndị a niile bụ ezie na dysphoria okike n’ime ụmụaka na-ahụ nkwụsi ike dị oke ala - nke sitere na 2.2% rue 30% n’ime ụmụ nwoke na site na 12% rue 50% n’ime ụmụ nwanyị, dabere na DSM-5. Dika Dr. Kristina Olson, onye oka mmuta na Mahadum Washington, si kwuo ya, "anyi enweghi otu data doro anya ma obu otu ozo." Nke bu eziokwu bu na onweghi onye puru ikwu ma ma o bu ihe nwuta nwoke na nwanyi. ka afọ gasịrị. Ọ bụ ya mere Olson ji eduga omumu ihe banyere umuaka transult nke 300 nke ahụ ga-arụpụta ihe karịrị afọ iri abụọ. “Ka m nwee ike, n’atụle, ịza nke ụmụaka ekwesighi ma ọ bụ agaghị agbanwe,” ka o kwuru. Ka ọ dị ugbu a, a ga-agba ọtụtụ n'ime ụmụaka ahụ ume ịga n'ihu na ịme mkpebi ahụ na-agbanwe ndụ site na amaghị nke sayensị.
Kpụrụ Na-achọ Ahụhụ, Ọ Bụghị Ihe Ntugharị
Nzaghachi ahụike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dysphoria bụ ịkwalite ma gosipụta nchoputa nwatakịrị ahụ na ịnye ọgwụgwọ homonụ na ntụgharị mmekọrịta mmadụ na ahụike na-enweghị isi na nyocha na-enweghị usoro ọgwụgwọ dị irè.
N’ezie, otu ndị dọkịta mba dị iche jikọtara na The Endocrine Society, Pediatric Endocrine Society, na World Professional Association of Transgender Health — nke a na-akwanyere ùgwù n'ihe ọmụmụ a.bu ntuziaka ideghari ka enwere ike ịkwado mgbanwe mgbanwe nwoke na nwanyị maka ụmụaka n'agbanyeghị ụmụaka na-erubeghị afọ iri na isii. Nke a na-anọchite anya nnukwu ọpụpụ na nke bụlarị ụkpụrụ nduzi maka ịgwọ ụmụaka ndị chere na ha nọ n'ụdị na-ezighi ezi.
Ruo ugbu a, ntuziaka ahụ tụrụ aro ka enye ụmụaka ụmụaka pregbalescent oge iwepụta oge iji nyekwu oge iji kpebie maka ịga n'ihu na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ na-eweta mbibi. Mana n'okpuru ntuziaka ọhụrụ, a ga-atụ aro ịgwọ ọrịa homonụ nke ndị na-alụkarị ọgụ maka ụmụaka na-erubeghị afọ iri na isii. Ọtụtụ mmetụta anụ ahụ nke homonụ, dịka njupụta nke ọkpụkpụ na belata nke ịmụ nwa, enweghị mgbagha. Edebeghị ihe egwu ndị ọzọ amụ ma ọlị.
N’oge na-adịbeghị anya, e-mail batara n’ime igbe mbata m nke isiokwu ya bụ “Ọ dị m ka m gere gị ntị” n’aka otu nwa okorobịa nke na-akwa ụta ị hormonụ ọgwụ homonụ na-awa n’ịwa ahụ na ịwa ahụ.
Anọ m naanị afọ iri abụọ. Agafere m n'oge m dị afọ iri na ụma ma waa m ahụ. Adị m obere ime ụdị ihe a. E tinyela m nnukwu ụta. Ahụghịkwa m na transgender ọzọ. Ọ dị m ka ochie m. Obi dị m ụtọ na ọdịdị nwanyị mana nke ahụ bụ ihe niile m chọrọ. Ọ dị m ka ebumnobi nke transgender na atụmanya nwoke na nwanyị. Aga m eme ihe ọ bụla iji mee ka amụ m laghachite. Mmetụta m dị mgbagwoju anya na echere m na ha agaghị agabiga. Abụ m naanị nwa okorobịa nke na-emetụta akụkụ nwanyị m. Enweghị m ike ikwere ihe m mere na ndụ m. Ma ugbu a enweghị m nhọrọ ọ bụla kama ịnara homonụ ruo mgbe ebighị ebi. Amaghị m ihe m ga-eme. Ọ dị m ka m na-atụfu uche m. Ihe m gaara eme bụ ịkwụsị homonụ m na ihe niile gaara adị mma. M ji obi eziokwu na-eche 100% nkịtị na dịkwa mma. . . a sị na mụ agatụbeghị n'ịwa ahụ ahụ.
Ahụ́ nwa nwoke a na-emebi kpam kpam n'ihi na ndị dọkịta, ndị na-enweghị echiche doro anya banyere onye ga-anọgidesi ike na ọnọdụ nwoke na nwanyị na-arịa nwoke na nwanyị, na-atụ aro maka ọgwụgwọ ndị na-eto eto nwere mmetụta na-emegiderịta nwoke na nwanyị. Ma dị ka nwa okorobịa a chọpụtara, ọbụnadị obi ike gbanwere mmetụta ya.
Akuko nkem Ejiri m ụdị ahụ: abụ m nwa nwoke trans, a wara m ahụ mgbanwe nwoke na nwanyị mgbe echere ruo mgbe m ghọrọ okenye. Ebe m bi na nsogbu amaghị nwoke na nwanyị na-anaghị eme ọfụma maka ndụ m niile, chọọkwa mkpebi, aghọrọ m ụzọ ntụgharị nke ndị dọkịta kacha arụ ọrụ maka m. Atụkwasara m nduzi ha obi. Mana nke ahụ egbochighị mmụọ ụta nke sochiri.
Ihe ndekọ dị ka nke a na-akwado data dị omimi: ọ nweghị onye maara onye kwesịrị ịkwaga ma ọ bụ afọ ole, ọ bụrụ na onye ọ bụla kwesịrị. N’enye ike anyị n’amụma banyere ọdịndị ọnya ọnya nke ụmụaka, dọkịta ọ bụla nke na-eme ihe na-eme ka ọgwụ mgbochi hormone dabere n’echiche nwatakịrị na-eleghara ma ọ bụ na-eleghara ihe ndị dị ndụ anya anya ma na-eme ka ihe ọmụma ọ na-enweghị. Ileghara sayensi a abiala oru ma tinye umuaka na ndi nne na nna n'ihe ize ndụ nke iwegharia na ndu ha niile n’ihi ikwenye n’omume ekwesighi.
Childrenmụaka na-eme “mkpebi” a dabere n'echiche, ọ bụghị nyocha nyocha nke nyocha, ma ụmụaka nwere obere ụmụaka ịme ụdị ndụ a, ma nwee ike ịkwa ụta. Kidsmụaka na ndị nne na nna kwesịrị inwe ntụkwasị obi na ndị dọkịta agaghị eji ndụ ha egwu egwuregwu Russia roulette.
Ntugharị mmekọrịta Ezigbo Nsogbu
Ọ bụrụgodi na ọ bụ ihe amamihe na -eme ime na homonụ na nke ịwa ahụ n'ime ndụ ụmụaka nwoke na - ata ahụhụ, ọ bụ na ọ bụghị ezigbo echiche inyere ha aka ịkwado mmekọrịta n'etiti ndị mmadụ, ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbaga mgbe ọtụtụ afọ gachara, dịka ndị okenye? Mba: omume a abụghị nnukwu ihe egwu.
Dika Eric Vilain, onye okacha amara na onye ndu nke Center for Genetic Medicine Research na Usoro Ahụike Nationalmụaka, na-ekwupụta, ngbanwe ọhaneze kwesịrị ịrụ ọrụ n'echiche ụmụaka. "Ọ bụrụ na a kpaliri ụmụaka ahụ na nkwenye a, ọ ga-esiri ha ike ịhapụ nkwenye a n'ihi na onye ọ bụla ga-ekwenye na ya, n'isi mmalite." Dr. Vilain kwuru. O bu otu ihe itolite na nmekorita nwoke na nwanyi; ọ bụ ihe ọzọ etolite ka agwara na onye so na otu “ụmụaka ụmụaka.”
Ma inweta mmadụ niile - nne na nna, ụmụnne, ụmụ akwụkwọ ibe - ka ekwenye na nwata nwoke bụ nwa agbọghọ anaghị eme ya, ya agbanweghị eziokwu ahụ na ọ nweghị onye nwere ike ịkọ ụdị ụmụaka ga - anọnye nwoke na nwanyị. dysphoric ka oge na-aga. Ọ dịghị nke a bụ ikwu okwu banyere ma ndị nọgidere na-arịa ọnụnọ nwoke na nwanyị ga-ahụta ahụ ha chọrọ site na ịbugharị. N’agbanyeghi umuaka a gbara ume ka ndi mmadu ghara iburu ndi mmadu n’uzo “n’uche ha gha arua otutu ogwu na arua aru,” ha aghaghi igbaso nzọzo nile n'ihi na agwala ha na ndu ha dum. trans, ”na ha bụ“ n'ezie ”okike ha chere na ha bụ.
Mana - dị ka ihe akaebe sayensị si dị n'oge na-adịbeghị anya na ọnụnọ ọnya ọnya nwoke na nwanyị na-eto eto - ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị a ga-etolite site na nke ha. Lowerbelata afọ ole dị ntakịrị maka ịwa ahụ naanị ga-eme ka ohere ụmụaka kwenye na usoro ha ga-akwa ụta.
Ekwesighi itinye ụmụaka transgender n'ụzọ adịghị mkpa ma ọ bụ nke a na-edozighi atụgharị uche nke gụnyere homonụ nwoke na nwanyị na ịwa ahụ. Obodo ndị ọkà mmụta sayensị egosighi ike ịdịte aka ma ọ bụ mụọ ihe egwu na ihe ọghọm a na-eme.
Ka ọ dịgodị, ekwela ka okwu mkparịta ụka metụtara okwu a dọpụ uche gị n'eziokwu ahụ: anyị na-eme nnwale na ụmụaka anyị. Anyị ga-amụta afọ iri abụọ site ugbu a, mgbe ọmụmụ Dr. Olson mezuru, ma ndị dọkịta ezighi ezi. Ya mere, anyị na-eche.
Walt Heyer bụ onye edemede zuru oke na onye na-ekwuchitere ọha. Site na weebụsaịtị ya, SexChangeRegret.com, na blog ya, WaltHeyer.com, Heyer na-ewelite ọha na eze gbasara omume ụta na ọghọm ya tara site na ịwa ahụ mgbanwe mgbanwe mmekọahụ.